Gabadhii kufsiga ku eedeysay Neymar oo markii ugu horreysay hadashaday & Muuqaal laga duubay labadooda iyagoo ku sugan Hoteelka oo la helay! – Gool FM
Gabadhii kufsiga ku eedeysay Neymar oo markii ugu horreysay hadashaday & Muuqaal laga duubay labadooda iyagoo ku sugan Hoteelka oo la helay!
(Paris) 06 Juunyo 2019. Gabadhii kufsiga ku eedeysay Neymar Jr ayaa markii ugu horreysay ka hadashay kiiskaas, iyadoo sidoo kale la helay muuqaal laga duubay labadooda iyagoo ku sugan Hoteelka la sheegay inuu kufsigu ka dhacay.
Magaceeda oo dhammaystiran gabadhan waxaa la yiraahdaa Najila Trindade Mendes de Souza waxaana ay shaaca ka qaaday inay markii hore ogoleyd inay gogoldhaaf la sameyso laacibka kooxda PSG, balse markii dambe ay diiday maadaama sida ay sheegay uusan haysan cijirka galmada.
Iyadoo Wareysi siisay SBT oo ah TV laga leeyahay dalka Brazil ayey Mendes de Souza dhacdaas ku tilmaantay mid kufsi ah, waxaana ay tiri: “Markii aan weydiiyay haddii uu wato cinjir, wuxuu igu yiri maya, waxaan u sheegay inaysan waxba dhici karin, sababtoo ah waxba ma dhici karin.”
“Kama uusan jawaabin waxba, waxa uu ku kacay falkaan, waxaana weydiistay inuu joojiyo, laakiin ma aqbalin, intii uu falka ku kacayay waxa uu feer iiga dhufanayay caloosha, deg deg ayay ahayd, kaddibna waan baxay, sidaas ayay wax u dhaceen.”
Mendes de Souza waxa ay ka hadashay waxa ka jira in iyada iyo Neymar ay farriimo ku wadaageen baraha xiriirka bulshada ee dhinaca Internet-ka, waxaana ay tiri: “Waxaan farriimo isku weydaarsanay Instagram-ka, waxaana uu i weydiiyay waqti aan imaan karo Magaalada Paris”
“Waxaan ku iri ‘haatanba waan imaan karaa, balse ma awoodo lacagta tikidka, wuxuu ii sheegay inuu isaga xalinayo middaas, waxa uu bixiyay lacagta tikidka iyo weliba lacagta hoteelka.”
Xiddiga xulka qaranka Brazil ee Neymar Jr ayaa been abuur ku tilmaamay sheekadaas, waxaana uu carabka ku adkeeyey inuusan wax qalad ah sameynin, isla markaana ay iyadu tahay beenleey doonaysa inay lacago fara-badan oo baad ah ka qaadato.
>- Dhinaca kale waxaa la helay muuqaal muujinaya gabadhii kufsiga ku eedeysay Neymar Jr oo Hoteelka dhexdiisa ku dharbaaxeysa, lana dagaaleysa xiddig reer Brazil.
Gabadhaan ayaa dharbaaxo la dhaceysa Neymar iyadoo xiddiga reer Brazil uu isku tuuray sariirta islamarkaana uu isku dayayo inuu iska celiyo gacan ka hadalkeeda.
Muuqaalka ayaa la sheegay in la duubay maalin kaddib markii ay sheegtay gabadhan in la kufsaday, waxaana muuqaalkaan kaamirada duubtay la wariyey in la dhigay suuliga qolka ay ku jireen labadooda, waxaana dhigtay gabdhan oo doonaysay inay duubto Neymar oo qiranaya inuu kufsaday maalintii ka horreysay maalintaa.
Macadda waxa sababay dagaalka labadooda dhexmaraya, balse muuqaalkan ayaa ah daqiiqad iyo lix ilbiriqsi oo kaliya, waxaana warbaahinta dalka Brazil ay sheegaysaa in Neymar uu Muuqaalkan ku leeyahay: “Maya, maya maya, ha i dharbaaxin.”
Kaddib markii la maqlay dharbaaxada koowaad oo aysan kaamiradu qabanin, Najila ayaa ku jawaabay: “Maya? miyaad i dharbaaxeysaa markaas aniga? Miyaad i garaaceysa aniga?”
Waxaana ay ku dhufanaysaa labo dharbaaxo oo kale ka hor inta aysan ku qeylinin cod dheer oo ay ku leedahay: “Balse anigaa ku garaacaya, ma garaneysaa sababta aan ku garaacayo?, ma garaneysaa sababta? Maxaa yeelay waxaad i fara-xumeysay shalay, kaligeey ayaad halkaan iiga tagtay.”
Warbaahinta qaarkeeda ayaa sheegaysa in la rumeysan yahay in muuqaalkaan hadda la helay uu qeyb ka yahay muuqaal 7 daqiiqo ah oo aan weli la soo bandhigin.
Kaddib saddexleeydii uu xalay dhalay Cristiano Ronaldo, imise saddexleey ayuu guud ahaan saxiixay?
Shaxda rasmiga ah kulanka UEFA Nations League ee xulalka Netherlands Vs England